तम्घासमा ३००० लिटर पेट्रोल आउँछ भन्ने हल्ला चलेसी………. (भिडियो) – Gulmiews
तम्घासमा ३००० लिटर पेट्रोल आउँछ भन्ने हल्ला चलेसी………. (भिडियो)
October 16, 2015 Sanju Kauchha
No comments	३००० लिटर पेट्रोल तम्घास आउदै छ भन्ने खबर संगै पेट्रोल भर्नको लागि पेट्रोल पम्प, पुरानो बैकरोड, चिदिचौर हुदै बालमन्दिर सम्म लाइन पुगेको थियो । चिदिचौरमा मात्र करिव ५०० बाइक थिए । अन्त्यमा ६०० बाइकले रु ३००- ३०० दरले पेट्रोल पाए भने करिब ५०० बाइक फिर्ता भए । हेरौँ तम्घासबाट तारा भुषालले खिच्नुभएको भिडियो:
प्रायोजित बिज्ञापन	@gulminewsराति १० बजे पछि देउसी–भैलो खेले कारबाही हुने https://t.co/LfcdR5amOA #Gulminews #Gulmi24 mins agoRetweetगुल्मीको भार्सेमा भलिबल प्रतियोगिता जित्नेलाई रु ३३ हजार पुरष्कार https://t.co/atJt5qcIdx #Gulminews #Gulmi34 mins agoRetweetभिडियो: गुल्मी भार्सेको मौलिक संस्कृती सहितको सोरठी https://t.co/dcNhlcdFLf #Gulminews #Gulmi41 mins agoRetweetगुल्मीमा पहिलो पटक बालिका दिवस मनाईयो, बिद्यालय जान छोड्ने किशोरीको सँख्या बढ्दै https://t.co/tvPRU5mkb9 #Gulminews #Gulmi2 hours agoRetweetदलित गैह्र दलित विच विधिवत विवाहः फोटो फिचर https://t.co/FkQInKPIxc #Gulminews #Gulmi3 hours agoRetweet अपराध खबर	यौन धन्दा गरिरहेका ११ जोडी प्रहरी द्धारा पक्राउ...	गुल्मीका एक युवाको बाटोमा कुटपिट, भिरमा शव फेला, हत्या अभियो...	शवको पहिचान : नेटाकी ८६ बर्षिय जसा श्रीस...	Gulminews Team	गुल्मीन्युज डट कम